ဘုရားစာတရားစာတွေရှယ်ကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီ ဖြူဖြူထွေး | BurmeseAsia
Home Celebrities ဘုရားစာတရားစာတွေရှယ်ကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီ ဖြူဖြူထွေး
ဘုရားစာတရားစာတွေရှယ်ကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီ ဖြူဖြူထွေး
ဖြူဖြူထွေးကတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် Follower ၈သန်းကျော်ရှိသည့် Social Influencer တဦးဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးတွင် ပြည်သူနှင့်တသားတည်း ရပ်တည်မှုမရှိသလို ဆန္ဒပြပွဲများတွင်လည်း ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ရပ် တည်မှု မှန်ကန်သူ မဟုတ်ကြောင်း သတ်မှတ်ခံရကာ လူမှုရေးဖယ်ကြဉ်မှုများ(Social Punishment) ပြုလုပ်ခြင်းခံထားရ သူ ဖြစ်သည်။
စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေသော ပြည်သူများနှင့်အတူ မရပ်တည်သည့် Facebook ဆယ်လီ ဖြူဖြူထွေးအား ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သပိတ်မှောက် (Boycott) ရန် တိုက်တွန်းမှုများ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ဘုရားတရားစာတွေ ရှယ်ရင်း ဖေ့ဘုတ်ပေါ်ကို ပြန်လည်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ…
သူမ ရဲ့ဖေ့ဘုတ် Myday မှာ လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း မှန်တာကိုလုပ်ပြီး ပွင့်လင်းသူထက် မဟုတ်မမှန်တာလုပ်ပြီး ဟန်ဆောင်ကောင်းသူက ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်. .. ကမ္ဘာပေါ်မှာ မေတ္တာတရားနဲ့မတန်တဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သူတစ်ပါးက ပို့ပေးလွှတ်တဲ့ မေတ္တာတရားကို မခံယူတတ်တဲ့ သူပဲရှိတာပါ ဆိုတဲ့ တရားစာလေးတွေကို တင်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွူဖွူထှေးကတော့ ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါတှငျ Follower ၈သနျးကြျောရှိသညျ့ Social Influencer တဦးဖွဈပွီး စဈအာဏာရှငျ ဆနျ့ကငျြရေးတှငျ ပွညျသူနှငျ့တသားတညျး ရပျတညျမှုမရှိသလို ဆန်ဒပွပှဲမြားတှငျလညျး ပါဝငျခွငျးမရှိသညျ့အတှကျ ရပျ တညျမှု မှနျကနျသူ မဟုတျကွောငျး သတျမှတျခံရကာ လူမှုရေးဖယျကွဉျမှုမြား(Social Punishment) ပွုလုပျခွငျးခံထားရ သူ ဖွဈသညျ။
စဈအာဏာရှငျကို ဆနျ့ကငျြတျောလှနျနသေော ပွညျသူမြားနှငျ့အတူ မရပျတညျသညျ့ Facebook ဆယျလီ ဖွူဖွူထှေးအား ကုမ်ပဏီမြားအနဖွေငျ့ သပိတျမှောကျ (Boycott) ရနျ တိုကျတှနျးမှုမြား ကယျြလောငျစှာ ထှကျပျေါလာပွီးနောကျဘုရားတရားစာတှေ ရှယျရငျး ဖဘေု့တျပျေါကို ပွနျလညျရောကျလာခဲ့ပွနျပါပွီ…
သူမ ရဲ့ဖဘေု့တျ Myday မှာ လူတှရေဲ့ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ပကျသကျပွီးတော့လညျး မှနျတာကိုလုပျပွီး ပှငျ့လငျးသူထကျ မဟုတျမမှနျတာလုပျပွီး ဟနျဆောငျကောငျးသူက ပိုပွီးကွောကျစရာကောငျးတယျ. .. ကမ်ဘာပျေါမှာ မတ်ေတာတရားနဲ့မတနျတဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သူတဈပါးက ပို့ပေးလှတျတဲ့ မတ်ေတာတရားကို မခံယူတတျတဲ့ သူပဲရှိတာပါ ဆိုတဲ့ တရားစာလေးတှကေို တငျထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဇာတာကိုတွက်ချက်ပြီး အတိအကျဟောကိန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ဆရာမတစ်ဦး
Next articleနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ် မဖြစ်ပေါ်ခင်အချိန်တုန်းက ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို ပရိတ်သတ်ကြီးအား အလွမ်းပြေမျှဝေပေးလိုက်တဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း